चीन OEM 63०639780० र 63०639 78 1 1१ VOLVO -Z5148 निर्माता र आपूर्तिकर्ताको लागि नियन्त्रण आर्म्स | TANGRUI
किन कन्ट्रोल आर्मस इम्पोर्टन्ट हो?
नियन्त्रण हतियारहरु दुबै एक कनेक्शन र धुवाँ पोइन्ट प्रदान गर्दछ तपाईको सस्पेंशन र चेसिस बीच। सामान्यतया शरीरको फ्रेममा स्टीयरिंग नक्कल जोड्ने, नियन्त्रण हतियार बल बल जोड्ने र बुशिंग्स जो सही पा wheel्ग्रा ट्र्याकिंग र स्थिति कायम राख्न ट्यान्डममा काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, एक कम नियन्त्रण हात चक्का को अनुदैर्ध्य र पार्श्व स्थिति सेट गर्न मद्दत गर्दछ जबकि सवारी चाल चलिरहेको छ।
नियन्त्रण हतियारले लोडिंग फोर्सको ठूलो भीडलाई प्रतिरोध गर्दछ, जस्तै त्वरण / ब्रेकि,, मोड्ने क्रममा कोर्नरिंग र सवारीको बडीको निलम्बित तौल। तिनीहरूसँग गतिशील प wheel्क्ति पंक्तिबद्ध गर्न अतिरिक्त कार्य पनि छ। यसले प्रसारित आवाज, सडक आघात र कम्पनलाई कम गर्दछ जबकि अनावश्यक निलम्बन आन्दोलनलाई प्रतिरोध प्रदान गर्दछ।
निलम्बन कन्फिगरेसन (मल्टि-लिंक, म्याकफेरसन, डबल विशबोन) मा निर्भर गर्दै, नियन्त्रण हतियारहरू अगाडि र पछाडि निलम्बन, दुबै माथिल्लो र तल्लो स्थितिमा स्थित गर्न सकिन्छ।
स्टेबलाइजर बारमा गाडीको बाँया र दायाँ सस्पेंशन जडान गरेर, स्टेबलाइजर लि links्कहरूले पा height्ग्राहरूलाई एकै उचाइमा कायम गर्दछ र सवारी साधन बडी रोल कम गर्दछ।
के हाम्रो नियन्त्रण हतियार यति ठूलो बनाउँछ? Tangrui प्राविधिकहरुलाई किनार दिन्छ, हरेक नियन्त्रण आर्मो कम्पोनेन्टको नवीनता द्वारा। औसतमा, हाम्रो नियन्त्रण हातहरू स्थापना गर्न %०% कम समय लिन्छ किनभने बल जोड्ने र बुशिंग्स पूर्व-स्थापित छन्। हाम्रो ईन्जिनियरहरूले हाम्रो पार्ट्सहरू स्थापना गर्न सजिलो बनाउन र लामो सेवा जीवन प्रदान गर्न निर्माणमा केन्द्रित छन्। दण्डनीय स्थायित्व परीक्षणको रोजगारमा, हामी तपाईंलाई विश्वास गर्न सक्नुहुने प्रदर्शन प्राप्त गर्न प्रत्येक नयाँ डिजाइन मान्य गर्दछौं।
फ्रन्ट एक्सल, बायाँ, तल्लो VOLVO XC90 [०-11/११]
फ्रन्ट एक्सल, दायाँ, तल्लो VOLVO XC90 [०-11/११]
ब्राण्ड VOLVO का लागि
अघिल्लो: OEM BS1A--3 34-5050० BS1A--3 34-00०० नियन्त्रण एआरएमएस का लागि मज्दा -Z5147
अर्को: Hight क्वालिटी कन्ट्रोल आर्म्स OEM 54500-3S000 HYUNDAI SONATA-Z5149 का लागि
विस्तारित नियन्त्रण हतियारहरू
स्ट्याम्प्ड स्टील कन्ट्रोल आर्म्स
ट्यूबलर नियन्त्रण हतियारहरू
टोयोटा - Z5144 को लागि नियन्त्रण आर्मस
OEM TD11-34-300B र TD11-34-350B नियन्त्रण एआरएमएस ...
Tangrui अनुकूलित नियंत्रण शाखा को लागी उपयुक्त ...
Hight क्वालिटी कन्ट्रोल आर्म्स OEM 500 54500500--3S000 Fo ...
फोक्सवैगन Passat-Z को लागी 8E0407510A नियन्त्रण आर्म्स ...
फ्रन्ट एडजस्टेबल अपर कन्ट्रोल आर्म्स उपयुक्त Fo ...
सदमे अवशोषक बोल्ट, व्हील हब, सदमे अवशोषक रबर, फ्रन्ट स्टीयरिंग नकल, टायर बल संयुक्त, हुड शक अवशोषक,